Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 13
Mipetraka ao amin'ny fianakaviana ve ny maty, eo amin'ny fiarahamonina, ary raha misy ny governemanta?
Ireo izay miala amin'ity fiainana ity dia maka fitsaharana izay lava na fohy, araka ny filàny. Avy eo izy ireo dia manohy ny fisiany ao aorian'ny fanjakana taorian'ny niainan'izy ireo teto an-tany. Saingy misy io fahasamihafana io, fa ny fiainana eto an-tany dia mitaky ireo fitsipika rehetra momba ny fivondronan'ny lehilahy iray eto amin'ity tontolo ity, ny fanjakana aorian'ny fanjakana dia mitaky fiara mifanaraka amin'ny fiaramanidina izay ilain'ny saina, ny ego.
Moa ve ny olona niara-niaina tamin'ny fianakaviany na tao amin'ny vondron'olona tety an-tany araka ny faniriany, ny faniriany hanohy io karazana fiainana io amin'ny fanjakana aorian'ny fahafatesana. Raha naleony ny fiainana irery, na fiainana nanokan-tena handalina na hanao fikarohana, dia tsy te hanana fiainana an-kafa; fa na izany na tsy izany, araka ny faniriany amin'ny fiainana ara-batana, dia hitohy ny faniriany aorian'ny fahafatesana.
Aorian'ny fahafatesana, ny olona, ​​ny ego, ny saina, dia mitohy amin'ny fahaizany rehetra, saingy mampihena ny vatana ara-batana sy ny endrik'io vatana ara-batana io. Na aiza na aiza no eritreretiny sy ny fahalianany dia ho eo ilay lehilahy. Na izany aza anefa, ny saina dia tafasaraka amin'izao tontolo izao amin'ny fisarahana amin'ny vatany ara-batana, tapaka ny haino aman-jery sy ny fifandraisana amin'ny tontolo ara-batana ary tsy afaka hiaraka amin'ny vatan'ny fianakaviany na ny vondrom-piarahamonina izay niamboho azy izy. ny heviny. Raha toa kosa ka ny eritreriny momba ny fianakaviana na ny fiaraha-monina dia nahery va izy fa hieritreritra azy ireo na hitana azy ireo araka ny heviny fa mety ho eritreretina miaraka amin'ny fianakaviany na ny namany izy raha mbola miaina eto an-tany na dia efa mipetraka lavitra aza izy firenena. Tsy hanana eritreritra vaovao izy, ary tsy mahazo vaovao momba ny fianakaviana na ny fianakaviany taorian'ny nahafatesany, ary tsy ho fantany momba ny hiafarany, araka ny fiheverana indraindray indraindray. Aorian'ny fahafatesana dia miaina ao an-tsaina izay nananany tamin'ny fiainana ara-batana ny olombelona. Eritreretiny indray izay noeritreretiny nandritra ny fiainany.
Misy tontolon'ny eritreritra, izay aorian'izao tontolo izao izay tena itoeran'ny olombelona na dia vatana vatana aza izy, satria azy izao tontolo izao rehefa mandika izany amin'ny tontolon'ny eritreriny izy. Fa misy tontolo iray hafa izay eo anelanelan'ny tontolon'ny eritreritra sy ny tontolon'ny nofo izay ny tontolon'ny faniriana (kama loca). Ao amin'ny tontolon'ny filana dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny olombelona. Ka aorian'ny fahafatesany dia misy vatan'olombelona maniry avy amin'izany ny olona, ​​ny saina, dia tsy maintsy manafaka ny tenany raha te hanana fotoana fifaliana na fialan-tsasatra aorian'ny fanjakana maty. Amin'ny tranga tsy fahita firy, ny olona, ​​ny saina, dia andevozin'ny vatany maniry mafy, amin'izay izy dia mety matetika ny toerana misy ny fianakaviany na ny fiarahamoniny taloha. Amin'ny tranga manokana toy izany dia toa misonoka zava-mahadomelina na mamo ny saina. Ny faniriana no ho anton-javatra lehibe indrindra. Ny fisehoan-javatra toy izany dia hitovy amin'ny iray amin'ny fitaoman'ny zava-mahadomelina na zava-mahamamo. Na eo aza izany, ny faniriana dia hiseho miharihary toa ny hanehoan'ny mpimamo ny faniriany. Amin'ny fisehoana vitsivitsy fotsiny amin'ny vatana maniry dia misy ny saina. Amin'ny maha-sainam-panahy noforonina ny fiainam-pianakaviana na ny fiainam-piarahamonina ho filamatra ao amin'ny tontolon'ny vatany, dia toy izany koa ny saina iray mitazona fiainam-pianakaviana na fiaraha-monina amin'ny tontolo eritreritra tsara aorian'ny fanjakana maty. Fa na dia eto amin'ity tontolo ara-batana ity aza ny fiainana mety dia toa aloka sy manjavozavo ary ny fiainana ara-batana no tena zava-misy ary ankehitriny kosa dia nivadika ny toe-javatra; ny tontolo idealy no tena izy ary ny nofo dia nanjavona tanteraka na nijanona ho idealy tsy azo ovaina fotsiny.
Eny, misy ny governemanta amin'ny fanjakana aorian'ny fahafatesana. Ny fanjakana tsirairay aorian'ny fahafatesana dia manana ny governemantany ary ny lalàn'ny fanjakana tsirairay dia mifehy an'ity fanjakana ity. Ny lalànan'ny fanjakana faniriana dia aseho amin'ny anarany manokana: ny faniriana. Ny tontolo tsara indrindra dia fehezin'ny eritreritra. Ny fanjakana tsirairay dia fehezina mandeha amin'ny alàlan'ny faniriana, na ny eritreritra tsara, tsirairay avy araka ny toetrany, ary ny rehetra araka ny fahamarinana.
Misy sazy na valisoa ho an'ny asa nataon'ireo maty, na mandritra ny fiainana na aorian'ny fahafatesana?
Eny, ary ny valin'ny asa tsirairay dia mitondra ny valiny manokana, araka ny hetsika ary araka ny antony manosika sy eritreritra izay nahatonga ny hetsika. Betsaka ny olona eto amin'ity tontolo ity no manao zavatra tsy mahalala, na izany aza, ny valiny dia mitondra ny valisoany na sazy. Ilay misintona ny basy iray izay tsy fantany no nitazona azy ary nanapaka ny rantsantanany, na ny tanan'ny namana, dia niaritra ny vokatra ara-batana, toy ny nitifitra azy tamin'ny fikasana handratra. Ny sazy ara-batana dia mitovy. Saingy tsy mijaly amin'ny sazy ara-tsaina izay manenina izy, izay hijaly raha nanatontosa ny hetsika tamin'ny fahalalana ny zavatra hitranga.
Mihatra amin'ny fanontaniana izany mandritra ny miaina ao anatin'ny tontolo ara-batana. Fa misy lafiny iray izay ny fanjakana taorian'ny fahafatesana. Ireo ao amin'ny fanjakana taorian'ny fahafatesana dia tsy misy fiantraikany amin'ny antony manaraka. Ity tontolo ity dia izao tontolo izao ny antony miteraka ary koa ny fiantraikany, fa ny fanjakana aorian'ny fika dia vokatra ihany. Ny vatana faniriana dia mitohy aorian'ny fahafatesana araka ny dikan'ny tsimokaretina amin'ny alàlan'ny fiainana an-tany. Noho izany, ny asa nataon'ny vondron-kery astraly, na amin'ny alàlan'ny saina ao amin'ny tontolo mahafinaritra azy ihany no vokatra, fa tsy antony. Ireo no vokatr'izy ireo ho valisoa na fanasaziana amin'ny asa atao amin'ny tontolo ara-batana. Fa ireo asa ireo dia tsy atao valisoa na manasazy.
Ny teny hoe "valisoa" sy ny "sazy" dia teny teolojika. Manana dikany manokana sy tia tena izy ireo. Na eto amin'ity tontolo ity na amin'ny tontolo hafa, ny tena lalàna dia mandika ny sazy midika hoe lesona nomena ny mpanao asa ratsy. Ny valisoa dia lesona omena ny mpanao asa tsara. Ny lesona nantsoina hoe sazy dia omena an'ilay mpanao fampisehoana mba hampianatra azy tsy hanao ratsy intsony. Mampianatra ny vokatry ny asa marina ny valisoa.
Ao anatin'ny vanim-potoana aorian'ny fahafatesana, ny vatana faniriana dia mijaly mitovy amin'ny olona manana filana matanjaka, rehefa tsy manana ny fomba izy na ny fahafaham-po amin'ny fahafaham-po. Ny vatana ara-batana no fitaovana ahafahan'ny vatana maniry manome fahafaham-po. Rehefa esorina na esorina amin'ny vatany vatana ny faniriana amin'ny fahafatesana, dia mijanona ny filan-dava, fa tsy fomba hahazoana fahafaham-po aminy izany. Ka raha ny faniriana mafy sy ny fanomezana fahafaham-po ara-batana dia misy aorian'ny fahafatesana ny hanoanana faniriana, na fandoroana firehetam-pitiavana, fa tsy misy fomba hanomezana fahafaham-po na fahafaham-po amin'izany. Saingy ny saina izay manana ny idealy avo dia mandalo ny fifaliana rehetra manoloana ny fahatanterahan'ireto idealy ireto satria eo amin'ny tontolo misy ny idealy izy.
Araka izany dia azontsika aorian'ny fahafatesana dia milaza ny sazy na ny valisoa, na ny antsoina hoe tsara, ny lesona momba ny asa tsara sy ratsy, toy ny vokatry ny eritreritra, ny asa ary ny zavatra natao nandritra ny niainany tamin'ny tontolo ara-batana.
Mahazo fahalalana ve ny maty?
Tsia, tsy mifanaraka amin'ny dikan'ilay teny izy ireo. Ny fahalalana rehetra raisin'ny saina dia tsy maintsy raisina mandritra ny miaina vatana vatana eto amin'ity tontolo ara-batana ity. Eto no tsy maintsy ahazahoana fahalalana raha tsy maintsy ahazoana fahalalana. Aorian'ny fahafatesana dia mety handalo ny fizotran'ny fandevonan-kanina na famonoan'olona isika, fa ny zavatra rehetra azo eto amin'ity tany ity ihany, amin'ny lafiny iray ihany, dia ny zanak'omby iray dia mandomoka ny fihinany raha mbola ao amin'ny fihinanany, fa ny zavatra nentiny tamin'io. ny tanimbary. Noho izany ny fiainana dia nandalo na namaky ireo faniriana, na eritreritra na idealy izay novokariny, nivelatra ary nohaingoina nandritra ny fiainana. Ny tena fahalalana ny tontolo rehetra dia tsy maintsy alaina mandritra ny itoerany. Tsy azon'ny tompon'andraikitra aorian'ny fahafatesana ny zavatra tsy mbola fantatra mandritra ny androm-piainany. Mety hanabe sy hiaina indray ilay zavatra fantany nandritra ny fiainana izy io, saingy tsy mahazo fahalalana vaovao aorian'ny fahafatesana.
Fantatry ny maty ve ny zava-mitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity?
Ny sasany mety, ny hafa tsy afaka. Miankina amin'izay tiantsika hoe "ny maty." Ny tany maniry ny tany no hany kilasin'ny kilasin'ny maty "izay mety mahalala izay hitranga eto amin'ity tontolo ity. Saingy tsy afaka mahalala izay hiafarany fotsiny izy ireo satria mifandraika amin'ny faniriana sy faniriana efa niainan'izy ireo nandritra ny fiainana, ary ny alehany dia mifandraika amin'izy ireo. Ohatra, ny vatan'ny filana mamo dia tsy hahalala afa-tsy izay hitranga eto amin'izao tontolo izao satria misy ifandraisany amin'ny faniriany ny hisotro ary na dia vao nahita ny manodidina sy ny olona efa zatra hisotro aza izy. Afaka mahita ny manodidina azy amin'ny alàlan'ny fisintonana voajanahary tiany indrindra izy, saingy mba hiaina ny zava-mitranga dia tsy maintsy ataony amin'ny alàlan'ny vatan'ny olona misotro, izay hataony amin'ny fidirana sy hitodihany amin'ilay misotro. ny fanirian'ny vatana mamo dia mety tsy hahafantatra izay zava-mitranga eo amin'ny tontolon'ny politika na ny literatiora na ny zava-kanto, na tsy hahalala na hahatakatra ny fahitana amin'ny astronomia na ny siansa matematika. Rehefa mitady ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny tontolo ara-batana ny olona tsirairay, ny vatam-paniriana dia mahasarika ny tontolo ara-batana mifanaraka amin'ny natiora.
Ny fanontaniana dia hoe, mety hainy ve izay hitranga na dia ao amin'ireo faritra ireo aza? Ny vatana faniriana tsotra dia tsy afaka, satria tsy manana taova ara-batana izy izay ahitany zavatra hita maso. Mety hahatsapa ny faniriana ary ho eo akaikin'ilay zavatra nampiseho azy io, saingy tsy afaka nahita ilay zavatra raha tsy niditra tao anaty vatan'olombelona iray ary nampiasa ireo taova fahitana na ireo fihetseham-po hafa mba hampifandraisana azy amin'ny tontolo ara-batana. Amin'ny tsara indrindra, ny vatana faniriana tsotra dia tsy mahita afa-tsy ny fanirian'ny tontolo ara-nofo fotsiny.
Ny saina izay nanasaraka ny fifandraisany tamin'ny vatana sy nandia ny tontolo tena izy dia tsy hahalala izay zava-mitranga eo amin'ny tontolo ara-batana. Ny lanitrany dia ny lanitrany. Ity lanitra na tontolo tsara tarehy ity dia hitsahatra tsy hiseho raha toa ka fantatra daholo ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny idealy an'ny tontolo eto an-tany dia mety ho fantatry ny olona nody tao amin'ny tontolo tsara indrindra, saingy satria ireo filana ireo ihany no hitovizany, toy ny fanandramana ny saina ao amin'ny tontolo tena misy azy.
Ahoana no hanazavanao ireo toe-javatra nahitana ny maty na tamin'ny nofinofy, na tamin'ny olona nifoha, ary nanambara fa ny fahafatesan'ny olona sasantsasany, ny ankamaroan'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana, dia efa akaiky?
Ny nofy izay tsy noho ny antony ara-batana dia avy amin'ny tontolon'ny astral na avy amin'ny tontolo eritreritra. Ny fahafatesan'ny olona iray izay nambara tamin'ny nofy dia midika fotsiny fa ny iray izay nanambara fa ho faty dia efa nametraka na namorona ny antony hanatanterahana ny fahafatesany, ary ny antony nahatonga izany dia hita taratry ny tontolon'ny astraly. Ao no mety ho hita fa sary; ny toe-javatra rehetra manoloana ny fahafatesana dia azo jerena koa raha tadiavina. Araka izany dia nofinofy ny nofinofy izay mety hitranga, araka ny nambara azy. Amin'ny tranga hisehoan'ny olona iray amin'ny nofy dia midika izany fa ny fisehoana toy izany dia mitarika ny sain'ny olona amin'ny nofy amin'ny fahafatesana ho avy. Natao izany na hanandrana hanaisotra ny fahafatesana, na hanomanana ny olona ho azy, na ho ohatra tokony hasongadin'ireo tena miahiahy.
Ny fotokevitra mitovy ihany dia ho voarohirohy amin'ity raharaha nisehoan'ny maty ary nanambara ny fahafatesan'ny olon-kafa iray izay mifoha, afa-tsy ny mason'ity olona ity dia hahatsapa ny endrika, na ny fahatsapana hafahafa vetivety hahita ny fijery. Ny antony mitovy dia ampiharina. Saingy ny fahasamihafana dia ny hoe raha ny fahitan'ny saina ny nofy mazava kokoa noho ny amin'ny famohazana ny fiainana, ary noho izany dia tsy tokony ho mavesatra ny orinasam-panala, ny fisehoana dia tokony hivoatra kokoa ary ny fahatsapana ara-batana dia nilalao mba hilalao. Ny maty izay niseho toy izany dia ilay vatana faniriana mifandray na mifandraika amin'ny fomba hafa amin'ny iray izay nambarany ny fahafatesany. Fa ny olona rehetra izay nambara fa ho faty dia tsy maty foana araka ny nambara. Midika izany (raha tsy voafitaka ny olona) fa ny antony mahatonga ny fahafatesana tsy voaroaka marina, fa ny fahafatesana no hanaraka raha tsy misy ny famerenam-baravarana hamongorana azy. Rehefa esorina ny fihetsika mety dia azo averina ny fahafatesana.
Moa ve ny maty dia nanintona ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviany ety an-tany, ary mijery azy ireo; Milaza ny renim-pianakaviana iray ve ny zanany kely?
Mety ho iray amin'ireo havany ao amin'ny fianakaviana no mety hahasarika olona iray na hafa amin'ny fianakaviana raha toa ka misy faniriana tsy feno izay matanjaka mandritra ny fiainana. Raha ohatra, ny olona te-hizara ampahan-tany iray izay nananany nandritra ny fiainana tamin'ny alalan'ny fitaka. Raha vantany vao natao ny conveyance, na tonga ny fananana mendrika dia tanteraka ny faniriana ary esorina ny saina avy amin'ireo fatorana mitazona azy. Raha ny renim-pianakaviana miambina ny zanany dia tsy misy izany raha tsy eo ny eritreritra fa matanjaka mandritra ny fiainana sy ny fotoana ahafatesana mitana ny sainny reny eo amin ny toe-piainan ny zanany. Saingy tokony hatsaha-maso izany mba hahafahana mivoaka ny reny ary avelan'ny ankizy miasa ny lahatra izay noforonin'izy ireo taloha. Rehefa avy nandia ny tontolony na ny lanitra izy dia mbola mieritreritra ny zaza tiana. Saingy ny eritreriny momba ny zaza dia tsy azo sorena amin'ny toe-piainana mahafinaritra azy, raha tsy izany dia tsy mety ny fanjakana. Raha mijaly ny zanaka dia tsy afaka mahalala izany izy raha tsy mijaly ny tenany, ary tsy misy toerana ao amin'ny tontolo milay. Ny fijaliana dia ampahany amin'ny lesona sy ny fiainana niainana izay ahazoan'ny saina sedraina ny fahalalana sy mianatra ny fomba hiainana sy hieritreretana ary hihetsika. Ny zava-mitranga dia ny reny, izay mitadidy fa ny zaza tia azy dia mety hisy fiantraikany amin'ny fisainana. Tsy afaka miambina azy ireo amin'ny fahasalaman'izy ireo ara-batana izy, saingy mety amin'ny alàlan'ny filatsahany avo lenta amin'ny idealy toy izany izy ireo rehefa hamaly ny eritreritra sy ny fiainany. Amin'ity fomba ity dia tsy ny zanak'ireo ray aman-dreny ihany no ampian'ireo izay nandao, izay ao amin'ny tontolo tsara indrindra na lanitra, fa ireo namana tafavoaka rehetra dia mety hanampy ireo izay miaina amin'izao tontolo izao raha toa ka avo sy mihalefaka ny idealy nody nandritra ny fifandraisana sy fisakaizana amin'ny fiainana ara-batana.
Ao amin'ny tontolon'ny maty no misy ny masoandro sy ny volana ary ny kintana toy ny eto amin'izao tontolo izao?
Tsia, tsia. Ny masoandro sy ny volana ary ny kintana dia voalaza fa vatana ara-batana ao anatin'ny tontolo iray. Tsy toy izany izy ireo ary tsy ho hita rehefa maty; satria na dia azo alaina ao an-tsaina aza ny fisainana azy ireo aorian'ny fahafatesana dia tsy hitovy amin'ny zavatra ireo ny eritreritra. Ilay astronomia izay noheverin'izy ireo tanteraka nandritra ny fianarany nandritra ny fahavelony, dia mety ho taitra amin'ny foto-keviny ihany izy taorian'ny fahafatesana, kanefa tsy nahita ny volana sy kintana ara-batana fotsiny izy, fa ny fisainany na ny heviny ihany. Ny masoandro sy ny volana ary ny kintana dia manome ny zavamiaina eto an-tany karazana karazany tokana sy mahery isan-karazany. Ny fahazavan'izao tontolo izao dia ny masoandro. Raha tsy misy masoandro dia ao anaty haizina isika. Aorian'ny fahafatesana dia ny saina no jiro izay manazava ny tontolo hafa satria mety hanazava ny vatana ihany koa izy. Saingy rehefa mandao ny vatany ara-batana ny saina na ego dia ny maizina dia ao anatin'ny haizina sy ny fahafatesana. Rehefa misaraka amin'ny faniriana ny saina dia ao anaty haizina koa io vatana io ary tsy maintsy ho faty koa izy io. Rehefa mandalo amin'ny toerany tsara ny saina dia manazava ny eritreritra sy ny hetahetan'ny fiainana. Fa ny masoandro ara-batana, na volana, na kintana, dia tsy mampamirapiratra ny fahazavana aorian'ny fahafatesana.
Azo atao ve ny mamelona ny maty amin'ny tsy fahalalana ny velona, ​​amin'ny fanolorana hevitra na asa?
Eny, azo atao ary matetika no mitranga fa ireo tompon'andraikitra izay manala ny faniriany ary matanjaka ny fiainany, dia noho ny fisian'izy ireo no nanosika ireo olona mora voarohirohy, nanao heloka izay mety tsy nataony raha tsy misy an'izany hery izany. Tsy midika akory izany fa ny hetsika dia noho ny fisian'ny antokom-pinoana manaisotra, ary tsy midika koa hoe tsy manan-tsiny ilay nanao ilay heloka natao tao anatin'izany fitaomana izany. Midika fotsiny izany fa hitady na hisarika azy ireo mety ho voataona indrindra ilay fikambanam-bazimba. Ny tena mety hampiaiky volana azy dia tokony ho haino aman-jery tsy misy fotony ambony na tanjany ara-pitondran-tena, na olon-kafa izay mitovy amin'ny iriny dia mitovitovy amin'n'ilay andrana izay nanintona azy. Azo atao izany ary matetika dia atao raha tsy misy ny fahalalana an'izay mandrisika hanao. Dia toy izany koa, azo atao ho an'ny eritreritra, izay manana toetra ambony kokoa, omena ny olon-kafa, saingy amin'ny toe-javatra tahaka izany, tsy ilaina ny manatona ny maty hasiana eritreritra, satria ny fisian'ny velona dia manana hery sy hery mihoatra noho ny eritreritra. amin'ny maty.